အပြုအစုကရှယ်ပဲ – မြန်မာသတင်းစုံ
မင်းမင်း ဒီနေ့ စိတ်ညစ်နေတယ်။ ဒီကုမ္မဏီကို ရောက်တာ တနှစ်ခွဲကျော်ပြီ အထက်အရာရှိနဲ့ လုံးဝမတည့်။ စလုံး အဖိုးကြီးက ရှေးရိုးဆန်တယ်။ လက်အောက်က အာအီး တွေရော အာတိအို တွေရော သူရစ်တဲ့ ဒဏ်မခံနိုင်ကြ။ ခဏခဏ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတော့ လက်အောက်ဝန်ထမ်းမမြဲ။ ဒီနေ့လဲ မင်းမင်း ချစ်သူနဲ့ ညဖက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချိန်းထားတာ ဘယ်လိုမှ ထွက်မရ။ အိုဗာတိုင် ဆင်းရအုံးမည်။ ဒီ အလုပ် ရောက်ပြီးကတည်းက ချစ်သူနဲ့က တဂျက်ဂျက်။ ခုလဲ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ နင်နဲ့ငါ ပြတ်ပြီတဲ့။ ပြတ်လဲ အေးတာပဲ သိပ်တော့ ခံစားမနေပါဘူး။ တွဲကတည်းကလဲ ကျောင်းသူ ချာတိတ်ဆိုတော့ ဂဂျီဂဂျောင် အရမ်းကျတဲ့ ချာတိတ်။ “မင်း သွားချင်သွားလေ။ ငါ နင့် တာဝန်ယူထားပေးမယ်” အထက်က အာအီး ကုလားမ ကတော့ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်။
တခုပဲ အလုပ်ထွက်ဖို့ ထွက်စာတင်တိုင်း ဖင်ပေါ့ ခိုင်းကောင်းတဲ့ မင်းမင်း ထွက်စာက သူမစီကနေ ကျော်ပြီး အိတ်အာ စီမရောက်။ မင်းမင်း သူမကို လက်ကာပြပြီး ပလပ်စတစ်ဦးထုပ်စောင်းကာ ဆိုဒ်ထဲ သွားလိုက်တယ်။ ဒီသောကြာ ညလဲ အိမ်ပြန်မိုးချုပ် ပေမည်တကား။ နိုဝင်ဘာလလည် မင်းမင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အိတ်အာ ရုံးခန်းက ထွက်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ရီးစားလဲပြတ်၊ ကန်ထရိုက်လဲပြည့်ကာ အလုပ်လဲ ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်ကာ တချို့ကိုနေ့လည်စာ လိုက်ကျွေးဖြစ်သည်။ “မင်း နင်နောက်အလုပ် မရသေးဘူး မဟုတ်လား? …… အဲ့ကုမ္မဏီမှာ ငါ့သူငယ်ချင်းရှိတယ်၊ နင့် ဖောင် ပို့ထားပေးရမလား” “ငါ အလုပ်မလုပ်ချင်သေးဘူး၊ ခဏနားပြီး ခိုင်မာတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးကြီး ရှာလိုက်အုံးမယ်”။
တကယ်က မင်းမင်း အလုပ်သစ်ရပြီးသား။ နောက်နှစ်မှ စဝင်ရမှာ။ ဒီဖက်က ဆယ့်သုံးလစာယူပြီး ခွင့်တွေ နှုတ်ကာ စောစောစီးစီး အလုပ်ထွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီဇင်ဘာ အေးအေးဆေးဆေး ခရီးထွက်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ ဒီညနေတော့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ ဂေးလမ်းမှာသွားဘုဖို့ ချိန်းထားတယ်။ အလုပ် ပရက်ရှာနဲ့ မဘုရတာလဲ ကြာပြီလေ။ ဂေးလမ်း ရောက်တော့ ဘီယာတစ်လုံးမှာကာ တစ်ယောက်တစ်ခွက် ခွက်တိုက်ကာ မော့လိုက်တယ်။ တကယ်က သူ့ကျေးဇူးနဲ့ သူ့ကုမ္မဏီမှာ အလုပ်တူတူလုပ်ရတော့မှာ ဆိုတော့ သူ့ကိုပြုစုရတာပေါ့။ “မင်းမင်း ထိုင်းလား? တရုတ်လား?” “သီရိလင်္ကာ” “ဖွီး မင်း အာအီး လို ညိုညက်ညက်တော့ရမှာ မဟုတ်ဘူး လခွီး” “ဟားဟားဟား အလကားစတာပါကွာ ” အဲ့လိုနဲ့ ကျနော်တို့ မီးနီအိမ်လေးထဲဝင်။
တူးပိစ်လေးတွေနဲ့ ထိုင်းမလေးတွေထဲက တစ်ယောက်စီစိတ်ကြိုက်ရွေး တစ်နာရီစာ ဒေါ်လာ တစ်ရာ စီပေးကာ သူတို့ ဦးဆောင်ရာ အခန်းလေးတွေထဲသို့ သွားကြသည်ပေါ့ဗျာ။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ထိုင်းမလေးက အဝတ်အစား ချွတ်ဖို့ပြောတယ်။ ဒီမှာက အချိန်က တန်ဖိုးရှိတယ်လေ။ မင်းမင်း အဝတ်အစားတွေချွတ်နေတုန်း ထိုင်းမလေးကလဲ ဘရာနဲ့ ပင်တီချွတ်ပြီးနေပြီ။ မင်းမင်း အဝတ်တွေယူပြီး ချိတ်နဲ့ချိတ်ရင်း ပြုံးပြပြီးမှန်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ရေချိုးကန်ကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ရှယ် ရေချိုးကန် ပဲ နှစ်ပေခွဲလောက်အမြင့်မှ ကန်ပါးပါးလေးရယ်။ မင်းမင်းလဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီး အဲ့ပေါ်မှာ ပက်လက်လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ထိုင်းမလေးက ရေပန်းကိုယူကာ သူ့ကိုယ်သူ ဆေးကြောရင်း ပါးစပ်ဆေးရည်ကို အဖုံးထဲထည့်ပြီး မင်းမင်းကိုပေးတယ်။
မင်းမင်းလဲ ပလုပ်ကျင်းရင်း အဖုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ ပလုပ်ကျင်းရင်း မင်းမင်းကို မှောက်ဖို့ပြောတာနဲ့ မှောက်ပေးလိုက်တယ်။ မင်းမင်း ဖင်ပေါ် တက်ခွလိုက်တဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားရတယ်။ လက်လေးနဲ့ ကျောကို ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးနေတယ်။ ပြီးတော့ နို့အုံလေးနဲ့ နို့သီးလေးရဲ့ ကျောကိုပွတ်တိုက်မှုနဲ့ အတူ ခါးနဲ့ဖင်တဝိုက်မှာ အဖုတ်မွှေးစူးရှရှနဲ့ ဝေ့ဝိုက်ပွတ်တိုက်နေတဲ့ အထိတွေ့ကို ခံစားရတယ်။ ထိုင်းမလေးရဲ့လက်က မင်းမင်းလက်နဲ့ ချိုင်းကြားကို ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ဆေးကြောပေးနေတယ်။ မင်းမင်းရဲ့ ခန္ဓာအနှံ့ ပွတ်တိုက်ထိတွေ့မှုနဲ့ အတူ ညီတော်မောင်းက နိုးကြားတက်ကြွလာတယ်။ ထိုင်းမလေးရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတူ မင်းမင်း မှောက်နေရာက ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ဒူးထောက် လေးဖက်ထောက်မိရဲ့ ဖြစ်သွားမှန်း မသိလိုက်မိဘူး။
သူမက မင်းမင်း ဒူးခေါင်း(ဒူးကောက်)ကွေးထက် ထိုင်ရင်း လက်က ညီတော်မောင်ကို ပွတ်တိုက်ဆေးကြောကာ ဂွေလှိမ်းပေးနေတယ်။ ခဏအကြာမှာ မင်းမင်းကို ပက်လက်လှန်စေတယ်။ ပြီးနောက် စောစောက အတိုင်း မင်းမင်းပေါ် မှောက်ကာ ဆပ်ပြာဆီချောချောနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးနေတယ်။ မင်းမင်း ထိုင်းမလေးကို စိုက်ကြည့်ကာ လက်က ခါးကိုကိုင်လိုက်တယ်။ ထိုင်းမလေး နှုတ်ခမ်းက မင်းမင်းနှုတ်ခမ်းကို နမ်းလာချိန်… မင်းမင်းလက်က သူမတင်လုံးလုံးလေးကို ပွတ်ညှစ်ရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့ဖိစုပ်လိုက်တယ်။ သူမလျှာလေးက မင်းမင်း ပါးစပ်ထဲတိုးဝင်လာသလို မင်းမင်းလျှာလေးနဲ့ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိယက်ပေးလိုက်တယ်။ ထိုင်းမလေးက မင်းမင်းကို ခွထိုင်ကာ ခါးကိုမတ်လိုက်ပြီး ရေပန်းနဲ့ သူမခန္ဓာနဲ့ မင်းမင်း ခန္ဓာ အနှံ့ ရေနဲ့ဆေးကြောပေးတယ်။
ပြီးမှ စနိုးတာဝါအေးအေးလေးဖောက်ကာ ဂျိုးကို သုတ်ပေးတယ်။ အကာအကွယ် ထုပ်လေးကို ဖောက်ကာ ဂျိုးမှာ စွပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အစွပ်ကအဆီတွေကို စနိုးတာဝါနဲ့ ဆေးကြောတယ်။ ခွက်ထဲကို ရေပူထည့်ကာ ငုံလိုက်ပြီး မင်းမင်း ဂျိုးကို ဖမ်းငုံလိုက်တယ်။ အိုး…. ရုတ်တရက် ဂျိုးက ပူနွေးနွေးလေးဖြစ်သွားတယ်။ ရေပူငုံပြီး ပါးစပ်စိကာ ဂျိုးငုံပြီး ပုလွေပေးတာ ပထမဆုံးခံစားဖူးတာပဲ။ ခဏကြာတော့ သူမရေကိုထွေးကာ မင်းမင်းကိုပြုံးပြတယ်။ “ဘယ်လိုလဲ ကောင်းလား?” မင်းမင်း သူမခေါင်းပေါ်က ဆံပင်လေးတွေ ပွတ်ရင်း ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ ထိုင်းမလေးက ရေသန့်ဘူး အဖုံးကိုဖွင့်ကာ ရေတငုံငုံလိုက်ရင်း စောစောကလို ဂျိုးကိုငုံလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ မင်းမင်း ခါးကော့သွားရတယ်။
ရေခဲရေငုံပြီး စုပ်လိုက်တာဆိုတော့ ဂျိုးက အေးပြီး ခါးကော့တက်သွားတာ။ ထိုင်းမလေးကတော့ သူမရဲ့ ပုလွေစွမ်းတွေ ပြနေလေရဲ့။ မင်းမင်း ၁၂၃၄ရေရင်း ခါးကော့ကာ သူမခေါင်းကို လက်နဲ့ ထိမ်းကိုင်ထားရတယ်။ အဲ့လို နောက်တခါ ရေပူငုံလွေးလိုက်၊ ရေအေးငုံ လွေးလိုက်နဲ့ ၃ကြိမ်စီ လွေးအပြီးမှာတော့ အစွပ်ကို ချွတ်ကာ မင်းမင်းကို ရေသုတ်ပေးပြီး သူမကိုယ်တိုင်ရေသုတ်ကာ မင်းမင်းလက်ကိုဆွဲပြီး မွှေ့ယာထူထူကြီးစီခေါ်သွားတယ်။ မွေ့ယာပေါ် မင်းမင်းကို လှဲစေပြီး အကာအကွယ် အသစ်ထပ်စွပ်ကာ ဂွေးစိကိုစုပ် ဂျိုးကို ဂွင်းတိုက်ပေးပါတယ်။ “ဘယ်ပုံစံနေပေးရမလဲ …” မင်းမင်း မွှေ့ယာပေါ်က ဆင်းကာ သူမကို မွှေ့ယာစပ် ပက်လက်နေစေ၍ ခါးကိုဆွဲ ခြေထောက်ကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းကာ တောက်လျှောက် မြန်မြန်နဲ့ ကြမ်းကြမ်း လိုးပါတော့တယ်။
မင်းမင်းရှေ့ ခေါင်းရင်းမှာလဲ မှန်ချပ်ကြီးကနေ ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်မြင်နေရသလို ခါးဆွဲလိုးရင်း ခေါင်းကို မော့ကြည့်လိုက်ရင်လဲ မျက်နှာကျက် မှန်ထဲမှာ ပက်လက်ထိုင်းမလေးကို ဗိုလ်ကြီးသေနပ်ထမ်းလိုးနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်နေရတာ တော်တော်ဖီးလ်လာပါတယ်။ ရေချိုး ပုလွေပေးနေကတည်းက ပြီးချင်နေတဲ့စိတ်ကို မချုပ်တီးတော့ပဲ အမုန်းဆွဲကာ တဆုံးပစ်ဆောင့်ရင်း ပြီသွားပါတော့တယ်။ ပြီးတာနဲ့ မင်းမင်း သူမဘေးမှာ ပစ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းမလေးက ပြီးသွားတဲ့ မင်းမင်းဂျိုးကို အစွပ်ချွတ်ကာ တစ်ရှူးစက္ကူနဲ့ သန့်ရှင်းပေးပါတယ်။ မင်းမင်း အမောဖြေရင်း မျက်နှာကျက်မှန်မှာ မြင်နေရတဲ့ နှစ်ယောက်သား ပက်လက်ပုံကိုကြည့်ရင်း သဘောကျနေမိတယ်။ ထိုင်းမလေးကလဲ မှန်ထဲကနေ မင်းမင်းကိုပြုံးပြတယ်။
ကိုယ်လေးစောင်းရင်း မင်းမင်းကိုခွကာ ဂျိုးကို လာစွနေတယ်။ “နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ?” “မင်းမင်း။ မင်းနာမည်ကရော?” “အချာရာ” “အချာရာ?” မင်းမင်း ဖုန်းကို ယူပြီး ဖေ့ဘွတ်ကနေ ….ကိုနှိပ်ပြီး သူမကို ဖုန်းပေးလိုက်တယ်။ သူမက …… မှာ အချာရာ လို့ရေးရင်း သူမရဲ့ ပရိုဖိုင်လေးကိုပြတာနဲ့ မင်းမင်း တခါထဲ ဖရန့်ရကွက် ပို့လိုက်တယ်။ သူမက ပြန်တောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းမင်းဂျိုးမှာ အကာတခုစွပ်ကာ မင်းမင်း အပေါ်တက်စောင့်တယ်။ မင်းမင်း ပက်လက်အနေအထားနဲ့ မျက်နှာကျက်ကိုကြည့်ကာ တဘောအကျကြီး ကျနေတယ်။ ထိုင်းမလေးက မင်းမင်းလက်ကို ကိုင်ကာ သူမနို့အုံတွေပေါ်တင်ပေးတယ်။ သူမစိတ်တိုင်းကျ နို့အုံတွေကို စုပ်ညှစ်ပေးနေလိုက်တယ်။ သူမမျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့။
အဲ့ အချိန်မှာ အခန်းထဲက ဘဲလ်က အကျယ်ကြီး ထမြည်ပါလေရော။ “မင်း၊ နောက်တစ်ချိန်ယူအုံးမလား?” “တစ်နာရီပြည့်ပြီလား အချာရာ?” “နိုးနိုး ဆယ့်ငါးမိနစ် ရသေးတယ်” “နောက်တစ်ချိန် မယူတော့ဘူး၊ ငါ့သူငယ်ချင်း စောင့်နေရလိမ့်မယ်” “အိုကေ” သူမ ကျနော့်အပေါ်ကထကာ နံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ ဖုန်းနဲ့ နောက်တစ်ချိန်မယူကြောင်း သွားပြောတယ်။ “ဒါမင်းကိုယ်ပိုင် အခန်းလား?” ဂေးလမ်းမှာက တချို့က မိန်းခလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်အခန်းပေးထားပြီး အဲ့မှာပဲနေ အဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ရေသန့်၊ ကွန်ဒုံ၊ တဘက်၊ တစ်ရှူးကို စာအုပ်စင်လိုမျိုးနဲ့ အပြည့်ဖြည့်ပေးထားတယ်။ သူမတို့ အသုံးအဆောင် လက်တော့၊ နဲ့ အဝတ်ဘီဒိုတွေပါ အခန်းထဲမှာ အပြည့်အစုံ ရှိတယ်။ တချို့ကျတော့ နေစရာ တခြားမှာပေးထားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခန်းကို ဘုံသုံးရတယ်။
အလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်သန့်ရှင်းပေးခဲ့ရတယ်။”ဟုတ်တယ် မင်း။ ဘာကြောင့်မေးတာလဲ?” “ငါက မြန်မာ အချာရာ။ ငါ ဆုန်ခရန်(သင်္ကြန်) ကိုသဘောကျတယ်။” “ငါမင်းကို အဝတ်ရေစိုနဲ့ လိုးချင်တယ်။ မုန့်ဖိုး ကောင်းကောင်း ပေးပါ့မယ်။” သူမ ခဏလေးတွေဝေ သွားပြီတော့။ ဘီဒိုဖွင့်ကာ ဂျိတ်မှာချိတ်ထားတဲ့ ဂါဝန် အဟောင်းဝါဝါ တထည်ကို ယူပြတယ်။ သူမ အဝတ်ဘီဒိုလေးက သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ အဝတ်တွေ ချိတ်တာချိတ် ခေါက်ပြီးစီစီရီရီနဲ့ သန့်ပြန့်နေလို့ သူမကို အမှတ်ပေးမိသေးတယ်။ သူမကို ပြုံးပြီး ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ သူမက ဂါဝန်ကို ခေါင်းကစွပ်ပြီး ကျနော့်ကို ဆွဲခေါ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ ရေပန်းကို ဖွင့်ကာ ကျနော့်ကိုပေးတယ်။ ကျနော်လဲ ရေပန်းနဲ့ သူမကိုဖြန်းပြီး ရေပက်လိုက်တယ်။ သူမလဲ ပျော်သွားပြီး ကျနော့်ကို ရေနဲ့ ပြန်ပက်တယ်။
ကျနော် သူမကို ဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးသူမပုခုံးကိုဖိကာ ဂျိုးဂျိုးကို စုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အချာရာက ကျနော့်ကို တစ်ချက် မော့ကြည့်ရင်း စောစောက လိုးထားတဲ့ ကွန်ဒုံကို ချွတ်လိုက်ကာ ဂျိုးကိုဖမ်းငုံပြီး လွေးပေးပါတယ်။ မင်းမင်း အချာရာကို ပြန်ဆွဲထူကာ ပုလွေပေးပေးထာတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းပေးလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းပြင်ထွက်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။ တကယ်က ကွိုင်ယူမလို့ပါ။ သူမကလဲ သိတယ်ထင်တယ် ကျနော့်လက်ကို ဆွဲလိုက်ပြီး… “အချိန်မရှိတော့ဘူး မင်း ဒီအတိုင်းပဲ လိုးတော့။ အပြင်မှာတော့ ပြီးပေးနော်” အချာရာက ဂါဝန်ကိုလှန်ကာ ရေချိုးကန်ကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးတယ်။ မင်းမင်းလဲ ဂျိုးကို အချာရာရဲ့ ပျူထွက်နေတဲ့ အဖုတ်လေးတေ့ ခါးကိုကိုင်ကာ မရပ်မနား ဆောင့်လိုးတော့တယ်။
အချာရာက အိုးလေးနောက်ပစ်ပစ်ပေးရင်း ပိုးစိုးပက်စက် အလိုးခံပါတယ်။ မင်းမင်း အချာရာ ပြီးသွားပြီဆိုတာ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အချာရာရဲ့ အတွင်းသားတွေက မင်းမင်းဂျိုးကို ညှစ်ပြီး စုပ်ယူနေသလို ခံစားရတာကြောင့် မထိမ်းနိုင်တော့ပဲ အချာရာ ပိပိလေးစီကနေ အမြန်စွဲနှုတ်လိုက်ရပါတယ်။ အချာရာက ချက်ချင်း မင်းမင်းဖက်လှဲ့က ဂျိုးကို ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း မျက်နှာလေးကို မော့ထားတာ ဆရာကျလှပါတယ်။ မင်းမင်းလဲ မထိမ်းနိုင်တော့ပဲ အချာရာမျက်နှာနဲ့ ပါးစပ်တဝိုက် သုတ်ရည်တွေ ပန်းမိပါတော့တယ်။ အချရာက ချစ်စဖွယ်ပြုံးကာ ဂျိုးကိုစုပ်ပေးပါသေးတယ်။ ပြီးမှ မင်းမင်းကို ရေချိုးသန့်ရှင်း ပေးကာ…. “မင်း အချိန်ပြည့်နေပြီ။
အဝတ်ဝတ်ပြီး သွားနှင့်တော့နော်။ အချာရာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်အုံးမယ်။ နောက်လဲ အချာရာစီ လာလည်နော်” မင်းမင်း ရေသုတ် အဝတ်လဲကာ ရေချိုးခန်းထဲက အချာရာကို မုန့်ဖို့ ပိုက်ဆံမြင်အောင်ပြကာ ကုတင်ဘေးက သူမပိုက်ဆံအိပ်နားထားခဲ့ပေးပြီး တံခါးဖွင့်ကာ အောက်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းက မှန်ခန်းထဲက ကောင်မလေးတွေ ကြည့်ကာ ကျနော့်ကိုစောင့်နေပါတယ်။ “မင်းမင်း မိုက်လား သူငယ်ချင်း?” “အေး ငါ သွားဖူးသမျှထဲမှာတော့ အခန်းအနေအထားရော အပြုအစုရော ရှယ်ပဲ” “ငါတော့ မုန့်ဖိုး ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်ပေးခဲ့တယ် လပ်ကီးဆဲဗင်းလေးကို၊ မင်းရော မင်းရဲ့ ဆယ့်သုံးဂဏန်းလေးကို မုန့်ဖိုးပေးခဲ့သေးလား?” မင်းမင်း ဘာမှ မပြောပဲ ရီပဲရီနေလိုက်တယ်….ပြီးပါပြီ။
ကျွန်​မနာမည်​ကနာမည်​က ​မေဣ​နြေ္ဒ​အောင်​ .. ကျွန်​မက တစ်​ဦးတည်း​သေးသမီးဆို​တော့အိမ်​ကလဲအရမ်းချစ်​ကြတာ​လေ ..ငယ်​ငယ်​တည်းကပတ်​၀န်းကျင်​အနီးအနားမှာ ကစား​ဖော်​ကစားဖက်​က ​ယောက်ျား​လေး​တွေချည်းပဲဆို​တော့ ကျွန်​မလဲသူတို့နဲ့​ပေါင်းပီး ​ယောက်ျား​လေးတစ်​​ယောက်​လိုပုံစံဖြစ်​​နေတာ ကျားကျားယားယား​ပေါ့…အိမ်​ကလဲတစ်ဦးတည်း​သောသမီး​လေးဆို​တော့ချစ်​လို့ ကျွန်​မ​နေချင်​သလိုပဲ​နေခိုင်းခဲ့ကြတာ …သူတို့လဲ ကျွန်​မကိုသားတစ်​​ယောက်​လိုပဲသ​ဘောထားကြတာ​လေ….ကျွန်​မကလဲ ကိုယ့်​ကိုကိုလဲ ​ယောက်ျား​လေးတစ်​​ယောက်​လိုပဲ ခံယူထားတာ….​ယောက်​ကလျာ​ပေါ့…မိန်းက​လေးက​ယောကျာ်းစိတ်​​ပေါက်​တာ မြတ်​​သေးတယ်​ …….တချို့ဆို မြင့်​မြတ်​တဲ့​ယျောက်ားဘ၀ကိုရတာ​တောင်​ ပုန်း​နေနဲ့သူနဲ့ ပွင့်​​နေတဲ့သူနဲ့​လေ….ထားပါ​တော့ အေ​​ခြာက်​​တွေကျွန်​မကိုဆဲ​နေပါဦးမယ်​ ခ်​ခ်​……ငယ်​ငယ်​တည်းကအကျင့်​ပါ​နေ​တော့ စကား​ပြောရင်​ ကျွန်​​တော်​ ခင်​ဗျား ပဲ​ပြောတတ်​တယ်​​လေ….အတန်း​ဖော်​​ယောက်ျား​လေး​တွေနဲ့ ​ဘောလုံး​တွေကန်​ ​ရေကူး စုံ​နေ​အောင်​ကမြင်းတာ….အဲ့လို လွန်​အားကြီးလို့လဲ နာမည်​အရင်း ​မေဣ​နြေ္ဒ​အောင်​ က​နေပီး ​အောင်​ကြီး ​အောင်​ကြီးလို့ပဲ ​ခေါ်ကြ​တော့တယ်​ ……..ကျွန်​မမိဘ​တွေကလဲ ပိုက်​ဆံနဲနဲချမ်းသာတယ်​ ပီးရင်​ ကျွန်​မကလဲ က​လေးဘသာဝလွန်​သာလွန်​တာ မဆိုးသွမ်းတဲ့သူဆို​တော့အရပ်​ထဲက၀ိုင်းချစ်​ကြတာ​ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်​​တွေ တဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်​မလဲအပျို​ဖော်​စ၀င်​​နေပြီ​လေ……ကျွန်​မနို့​လေး​တွေ စူလာတယ်​ ……..ရာသီလာတာတို့ဘာတို့လဲ စဖြစ်​လာတယ်​……ပီးကျ ​ကျွန်​မ​စောက်​ဖုတ်​မှာ အ​မွှေးနု​လေး​တွေလဲ ​ရေး​ရေး​လေးဖြစ်​လာပီ​လေ…….အာ့​နွေအကုန်​လုံးကိုကျွန်​မမုန်းတယ်​ အဲ့တုန်းက​ပေါ့…….ကျွန်​မကိုယ်​ကျွန်​မ ​ယျောက်ား​လေးလို့ပဲခံယူထားတာ​လေ…..ဒါ​တွေဖြစ်​လာ​တော့ […]